EZINGENA MANJE: I-SABC isimxoshile uHlaudi Motsoeneng | News24
Johannesburg – USihlalo webhodi lakwaSABC, uKhanyisile Kweyama, uthi ibhodi lale nhlangano lizamukele izincomo zokuthi lixoshe obeyisikhulu esiphezulu sale nhlangano yezokusakaza, uHlaudi Motsoeneng. UMotsoeneng uxoshelwe ukungaziphathi kahle kanye nokufaka iSABC ehlazweni.
UKweyama udalule lokhu esithangamini seSABC nabezindaba esiqhubekayo emahhovisi ale nhlangano yezokusakaza e-Auckland Park, eGoli.
Ngaphambilini ngoMsombuluko, iNews24 ibike ukuthi lowo owayeyi-COO yeSABC, uHlaudi Motsoeneng, ulahlwe amacala abebekwe wona ekuqondisweni izigwegwe kwangaphakathi, umthombo othembekile osondelene nesigcawu sokuqondisa izigwegwe utshele iNews24.
OLUNYE UDABA: UHlaudi Motsoeneng ulahlwe amacala eqondiswa izigwegwe yiSABC
La macala abemayelana nesithangami sabezindaba asibamba nesadonsa amahora amane ngomhlaka-19 ku-Ephreli, nalapho avikela khona umgomo wakhe wokudlalwa “okungu-90% komculo wasekhaya”.
Bese kuvele kulindelekile ukuthi ibhodi lesikhashana namhlanje lizoba nomhlangano ukubhunga ngalesi sinqumo sikaSihlalo wesigcawu sokuqondisa izigwegwe, u-Advocate Nazeer Cassim.
Okhulumela iSABC, uKaiser Kganyago, utshele iNews24 ukuthi ubengakawuboni umbiko, wathi futhi uzophawula ekuhambeni kwesikhathi.
NgoMeyi kulo nyaka, iNkantolo yezabaSebenzi yachitha isicelo sakhe sokuthi kumiswe ukuqondiswa kwakhe izigwegwe kanye nokuthi uCassim ahoxe esigcawini sokuqondiswa kwakhe izigwegwe.